Dowladda Federaalka oo Casumaad u Fidisay Madaxda Maamul gobaleedyadda – Radio Daljir
Dowladda Federaalka oo Casumaad u Fidisay Madaxda Maamul gobaleedyadda
Oktoobar 13, 2017 7:55 b 0
Dowladda Federaalka Soomaaliya ayaa casuumaad rasmi ah u dirtay Madaxweynayaasha Dowlad Goboleedyada dalka, kuwaasi oo dhowaan tagaya magaalada Muqdisho.
Dowladda ayaa sheegtay in ay ka go’an tahay sidii loo xojin lahaa wada shaqeynta u dhaxeysa dowladda dhexe iyo dowlad goboleedyada dalka.
Wasiirka Wasaaradda Warfaafinta Xukuumadda Federaalka Soomaaliya Eng. C/raxmaan Cumar Cusmaan (Yariisow) ayaa sheegay in casuumaad loo diray madaxda dowladda goboleedyada dalka islamarkaana ay imaanayaan Muqdisho.
“Baaqii Madaxweynaha Soomaaliya Maxamed C/laah Maxamed (Farmaajo) ee ahaa midnimada iyo wadajirka in laga wada shaqeeyo, sidaasi darteed Madaxweynaha iyo Ra’iisul Wasaaraha waxay casuumaad rasmi ah u dirayaan Madaxda Dowlad Goboleedyada, si looga hadlo xiriirka iyo wadashaqeynta.” Ayuu yiri Yariisow.
Tahriibayaal u Baddan Somaali oo lagu Xir Xiray Dalka Giriiga
Ciidamadda Amaanka Muqdisho oo Maandooriye qabtay